Mogadishu Journal » 2018 » January » 13
Madaxweynaha Soomaaliya oo goor dhaw gaaray Gaalkacyo
Mjournal :-Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa goor dhow gaaray magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug, halkaasoo si weyn loogu soo dhoweeyay. Wafdiga Madaxweynaha oo ka soo kicitimay magaalada Boosaaso ayaa la filayaa inay caawa ku hoydaan magaalada...
Guddoomiye Taabit oo ka hadlay maqaamka caasimadda iyo arrimo kale
Mjournal :-Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa iftiimiyay dhowr waxyaabood oo shaki laga qabay maalmihii lasoo dhaafay, kadib wareysi gaar ah oo uu siiyay TV-ga Horn Cable. Taabid oo ah siyaasi dhalinyaro ah ayaa noqday mid ka mid ah shaqsiyaadka ugu saameynta ee dowladda,...
Xaliimo Yareey oo laga sii daayay Xabsiga Dhuusa-Mareeb
Mjournal :- Kadib markii ciidamo ka tirsan Maamulka Magaalada Dhuusamareeb xabsi guri ay ka dhigeen Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Madaxa banaan ee dalka Xaliimo Ismaaciil, ayaa maanta kulan raali gelin waxaa ugu tagay madaxa Xukuumadda Galmudug. Sheekh Maxamed Shaakir Cali...
Mjournal :-Soomaaliya iyo Turkiga ayaa magaalada Ankara ku kala saxiixday heshiis wax is dhaafsi ganacsi oo dhinacyo badan leh, kaddib markii ay yeeshyeen shir ku saabsan iskaashiga ganacsi ee labada dal. Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wafdi uu...
Mjournal :-Midowga Afrika ayaa ugu baaqay Madaxweyne Donald Trump inuu ka laabto hadal gaf ahaa oo la sheegay inuu u adeegsaday wadammada Afrika islamarkaana uu raaligelin hadalkaasi ka bixiyo. Bayaan si adag loo soo qoray ayuu Midowga Afrika ku muujiyay sida uu uga caraysan...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Bosaso ee xarunta Gobolka Bari ayaa kulamo gaar-gaar ah la yeeshay hoggaanka dhaqanka iyo Ganacsatada Gobolka. Madaxweynaha ayaa kala hadlay ganacsatada kaalinta ay ku...